Vibenomics: Shakhsiyeed, Muusig Goob ku saleysan iyo Fariin | Martech Zone
Vibenomics: Shakhsiyeed, Muusig Goob ku saleysan iyo Fariin
Sabti, Febraayo 24, 2018 Isniin, February 26, 2018 Douglas Karr
Madaxa shirkadda 'Car Car Wash' Brent Oakley dhibaato ayaa soo food saartay. Maydhayaashiisa gawaarida ee heer sare waxay ahaayeen kuwa wax lagu dhufto, laakiin intii macaamiishiisu ay sugayeen gaariga tiirarka leh, cidina kuma mashquulin wax soo saarka iyo adeegyada cusub ee ay bixin lahaayeen. Wuxuu abuuray barxad uu ugu duubi karo macaamiishiisa fariimo shaqsiyeed, fariimo ku saleysan goobta iyo muusig.
Markii uu bilaabay inuu ku dhiirrigeliyo beddelka weelka muraayadda iyadoo loo sii marinayo raadiyaha dukaanka ku jira, wuxuu hal bil gudaheed ku iibiyay masaxayaal ka badan wixii uu iibiyey shantii sano ee la soo dhaafay. Brent wuu ogaa inuusan kaliya xal u helin macaamiishiisa, wuxuu lahaa barxad ay warshaduhu u baahnaayeen. Marka, wuxuu ka tagey meheraddii dhaqista gawaarida oo uu bilaabay Vibenomics.
Vibenomics waa barxad warbaahineed oo internetka ah oo bixisa liisaska muusikada la habeeyay iyo farriimo aan xaddidneyn, xirfad-duuban. U fiirso sida barnaamijka casriga ah ee Vibenomics uu u abuurayo jawi gaar ah oo dhaqaajiya dhaqaalaha ganacsiga si fudud oo wax ku ool ah.
Dukaamada tafaariiqda badanaa waxay bixiyaan kharashka xalalka muusikada ruqsada haysta, laakiin Vibenmoics ayaa dhab ahaantii bixisa xal muusig iyo fariin oo leh soo celin maalgashi.
Vibenomics waxay siisaa ganacsiyada marin maktabad ruqsad buuxda u haysata muusikada iyo adeegsi fudud oo u oggolaanaya iyaga inay u soo gudbiyaan una helaan ogeysiisyo xirfadaysan oo duuban isla maalinta aad codsato. Ganacsiyadu xitaa uma baahna inay ka walwalaan ballaadhinta ama arrimaha farsamada - madalku wuxuu ku shaqeeyaa kiniinka ku shaqeeya Sprint. Kaliya ku dheji, oo waad kacaysaa oo socotaa!
Kaliya maahan ganacsiyada inay daabacaan farriintooda gaarka ah, waxay sidoo kale u furi karaan shabakaddooda xayeysiistayaasha dhinac saddexaad! Fiiri tooda xal si aad wax badan uga barato waxay ku caawin karaan warshadahaaga.
Tags: fariintaMusicshabakadda raadiyahatafaariiqda maqalkavibenomics